यूएईविरुद्ध नेपालको खराब सुरुवात, रित–पवन शून्य रनमै आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
यूएईविरुद्ध नेपालको खराब सुरुवात, रित–पवन शून्य रनमै आउट !
काठमाडौंः श्रीलंकामा भइरहेको एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटको आफ्नो अन्तिम खेलमा यूएईविरुद्ध नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपालले आज पहिलो ओभरको पहिलो बलमै रित गौतमलाई शून्य रनमा गुमायो । उनी क्याच आउटको सिकार भए । यस्तै अर्को ओपनर पवन सराफ पनि शून्य रनमै आउट भए । उनी २.४ ओभरमा बोल्ड आउट भए ।
याे पनि पढ्नुस सागरको घातक बलिङ, यूएईलाई तेस्रो झड्का (अपडेट)
आफनो अन्तिम खेलमा नेपालले टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले ७ ओभरमा २ विकेट गुमाएर ३० रन बनाएको छ । समूह ‘बी’ मा रहेका नेपाल र यूएई दुबै अंकविहीन छन्।
यस अघि पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलंकासँग पाँच विकेटले हार ब्यहोरेको थियो भने बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित भएको छ । आज नेपाली टिमको प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
ट्याग्स: नेपाल भर्सेस युएई, पवन सराफ, यू–१९ एसिया कप